Miaramila vidéos ONLY
fanontaniana Miaramila vidéos ONLY
Misaotra anareo nandray: 19
2 taona 6 volana lasa izay #433 by Colonelwing
Andro tsara ,, Gentelmen manana fitoerany aza!
Izaho dia mampiasa ity lohahevitra ity FORUM ho an'ny miaramila lahatsary MAMPIASA ONLY ...
Noho ny fanajana izany!
2 taona 6 volana lasa izay - 2 taona 6 volana lasa izay #434 by Colonelwing
Tsara Day Gentelmen ,,
Aoka hanomboka amin'ny olona tsara Name Dave Groark ...
Dave Groark manome antsika ny antsipiriany walkaround ny Lockheed F-104 Starfighter. Dave ihany koa dia mizara maro hafa momba izy sy ny namany manidina ny F-104 sy ny zava-niainany. Izany dia Naka sary tao amin'ny Historic Museum ao Aviation Fahatsiarovana Tyler Texas.
Manana fanajana ary manana seza sy manaraka izay ny olona efa nanao hoe: & milaza aminareo ny momba ...
F-104 Starfighter Walkaround
Ambadiky ny sehatra rehefa afaka ny F -104 Walkaround Video Alefao
Oh ,, rariny ianao efa tsara rehetra zazalahy tamin'ny eto ,, nahazo anareo aho Bonus kely ,, fa ny fanajana anao nomena Military VETs.
Tohizo hatrany !
"Tamin'ny Desambra 10, 1963, raha mizaha toetra ny NF-104A balafomanga-augmented mpahay siansa, mpampiofana, dia Saika maty ny fiaramanidina, rehefa nivoaka avy tao amin'ny 108,700 fanaraha-maso tongony (efa ho 21 kilaometatra teo) ka nianjera. Ary parachuted toerana azo antoka amin'ny 8,500 tongony rehefa vainly miady mba hifehy ny tsy manan-kery, haingana lavo asa tanana. Ao amin'io zava-nitranga dia tonga ny voalohany mpanamory hanaovana ejection vonjy taitra ao amin'ny tsindry feno fitoriana ilaina ho an'ny sidina haavo ambony. "
Ny fiaramanidina no rava ao amin'ny manaraka fianjerana. Fanadihadiana nampiseho taty aoriana fa ny mahatonga ny fianjerana dia namoly izay vokatry ny zoro be loatra ny fanafihana sy ny tsy fahampian'ny fiaramanidina hamaly. Ny zoro be loatra ny fanafihana dia tsy vokatry ny mpanamory fahan'ny Fa ny fisian'ny toe-javatra gyroscopic nanangana ny J79 spooling maotera rehefa nakatona ny balafomanga-Powered Zoom climb dingana.
Ny fianjerana dia aseho ao amin'ny sarimihetsika "The Right Stuff." Na izany aza, ny tale / mpanoratra niova ny ankamaroan'ny ny zava-misy / zava-nitranga manodidina ny loza. Momba ny hany zavatra natao marina izy ireo dia ny hoe ny F-104 no fianjerana ka dia piloted ny Yeager.
Ny stunt olona milalao Yeager ao amin'ny sarimihetsika maty. Tamin'ny Zoma, Janoary 14, 1983, ny filming dia ny recommence. Ny nomanina Hanketo dia ny hanomboka amin'ny 10,500 tongotra avy amin'ny Cessna 206, nisoratra anarana toy ny N29173. Ny fakan-tsary mpandraharaha, Randy Deluca, ary Svec nitsambikina tsy loza, dia ny setroka gropy tsy miasa. Ary ny roa natao ny samy hafa mandra-pahatongany tany 3,500 tongotra.
Izy ireo nisaraka, fanarahan'ny niala tsirairay, ary nanohy ny hanafaka-lavo amin'ny Deluca anjara ny lehibe indrindra amin'ny 2,500 elon'aina tongony. Svec, izay efa saiky lavo tao amin'ny toerana fisaka sy mafy orina, tsy napetraka na ny chutes. Rehefa nitsambikina tsy misy mandeha ho azy fampahavitrihana fitaovana, dia fiantraikany tany an-efitra, namono ny 35-taona avy hatrany.
Ny fandinihana ny roa Svec ny Kilonga sy ny tahiry chutes tsy nampiseho olana amin'ny na, sy nanatri-maso teo amin'ny tany tsy nahita famantarana ny tolona na olana ho azy. Ny akanjo nanaovany, tsy tena sarotra ny hifindra manodidina sy, afa-tsy ny fanaovana loha manontolo fiarovan-doha, na inona na inona dia avy amin'ny olon-tsotra. Tamin'ny farany, tsy nisy fanazavana hita noho ny tonga volana maty ny ela nihetezana maherin'ny 2,000 jumps, na dia be Nihevitra ny setroky nadika hoe azy tsy nahatsiaro tena, ary rehefa tsy afaka.
Chuck Yeager ny Test Flight / Crash amin'ny The F-104
Fanovana farany: 2 taona 6 volana lasa izay Colonelwing.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Gh0stRider203
2 taona 6 volana lasa izay - 2 taona 6 volana lasa izay #435 by Colonelwing
Tsara ny andro Gentelmen ,,,
Vietnam, Fighter Pilot POW Tony Marshall
LT Col Tony Marshall (USAF Ret.) Mizara fitantarana manidina F-4 Phantom mpiady-baomba tao Vietnam Avaratra mandra-fiaramanidina nipoaka, dia voasambotra ary niaritra ny fahoriana mafy toy ny POW.
2 taona 6 volana lasa izay - 2 taona 6 volana lasa izay #438 by Colonelwing
Mahatahotra F-4 Phantom Gentelmen ,,.
Ity lahatsary ity dia maneho HD fanabeazana ny fomba nampiasa ny United States isan-karazany ny F-4 Phantom fiaramanidina no nampiasaina nanerana an'i Azia Atsimo Atsinanana 1960s-1970s ny Etazonia Air Force (USAF). Ny Phantom dia lehibe ambony fiaramanidina tamin'ny hafainganam-pandehan'ny ny mạch 2.2. Afaka mitondra mihoatra noho 18,000 kilao (8,400 kg) amin'ny sivy hardpoints ivelany. Ny F-4 koa nampiasaina be dia be, ary nanompo tahaka ny tena rivotra ambony fiaramanidina ho an'ny tafika an-dranomasina sy USAF, ary lasa zava-dehibe eo amin'ny tany-fanampiana sy avy eny ambony Reconnaissance andraikitra. Ny Phantom manana ny fanavahana ny maha farany Etazonia fiaramanidina Nalefa fiaramanidina mba hahazo toerana ao amin'ny abidy taonjato 20th. Ny McDonnell Douglas F-4 Phantom II dia voizin'olon-droa roa-seza, kambana-maotera, rehetra-Weather, fahari-isan-karazany supersonic interceptor fiaramanidina fiaramanidina nanjary am-boalohany ho an'ny United States amin'ny McDonnell Aircraft. Izany asa fanompoana niditra voalohany tao 1960 ary nanaporofo tena hilefitra sy ny tapaky ny volana 1960s lasa tena ampahany ny tsirairay elatra rivotra.
2 taona 6 volana lasa izay #439 by Colonelwing
Amin'ny fanajana rehetra ,, Manolotra anao Brig. Gen. Robin ankizy Gentelmen!
Iza moa i Robin ataon '?
An American Hero - Robin ankizy
Robin ankizy (Jolay 14, 1922 - Jona 14, 2007) dia mpanamory mpiady Amerikana sy ankapobeny mpiandraikitra ny US Air Force. Izy dia "telo abidy", miaraka amin'ny atambatra ny 16 fandresena tamin'ny Ady Lehibe II sy ny ady tany Vietnam. Nisotro ronono izy tamin'ny 1973 toy ny brigadier jeneraly.
dia zanak'i Tafika Air Forces Major Jeneraly Robert ankizy, nianatra tao West Point, ary ny vokatry ny ny fanabeazana ao am-piandohan'ny taona ny US Tafika Corps Air, ankizy epitomized ny tanora ny Ady Lehibe II mpanamory fiaramanidina mpiady. Dia nitoetra teo amin'ny fanompoana araka ny lasa ny United States Air Force, na dia eo aza matetika rehefa mifanohitra sy ny mpitarika, ary ny mpisava lalana iray amin'ireo mpanamory fiaramanidina. Rising ny didin'i mpiady roa elatra, ankizy dia raisina eo fiaramanidina mpahay tantara, sy ny namany, tahaka ny tsara indrindra komandin'ny elatry ny ady tany Vietnam, fa na ny rivotra-niady fahaiza-manao, ary ny nalaza ho mpitarika ny ady.
Ankizy dia nasandratry ny brigadier ankapobeny rehefa niverina avy any Vietnam, nefa tsy manana didy lehibe iray hafa. Ny sisa ny asany dia lany amin'ny tsy-miasa toerana, araka ny komandy mpibaiko ny tanety tao amin'ny United States Air Force Academy, ary toy ny manam-pahefana ao amin'ny Air Force Inspektera Jeneralin'ny Biraon'ny.
Ady Heroes ny Skies - Vietnam, Dogfights Robin ankizy
2 taona 6 volana lasa izay #440 by Colonelwing
Ny Aces ny Azia Atsimo Atsinanana
United States fiaramanidina nitoto fanohanana asa any Azia Atsimo Atsinanana, ihany koa ny manazava ny fomba mpanamory fiaramanidina ambany fandrindran'ny ny hanafoanana ny zava-dehibe tany lasibatra toy ny tetezana, efitra ambanin'ny tany sy ny fiara.
2 taona 6 volana lasa izay #448 by Colonelwing
Ny mibodo Gentelmen ... Enjoy!
Happy Day Brrrt Special
Warthog GAU-8 BRRRT Strafing Gun Mihazakazaka Ravao Unmanned Humvees
A-10 Warthog anti-tanky fiaramanidina nitarika mahatahotra GAU-8 strafing basy mihazakazaka amin'ny unmanned humvee fiara mba hitsapana ny fahaizany mba handringana mandady sy voasakantsakan'ny lasibatra.
Board Categories About Rikoooo - Tongasoa eto New Members - Soso-kevitra Box - Fanambarana Flight Simulators Forums - FSX - FSX Wiki puzzle.svg - FS2004 - Prepar3D - X-Plane Media - sary - Videos Hangar Talk - Fly feon-kira - Inona ary aiza no manidina androany - Real fiaramanidina Hafa sidina simulators - Flight Gear fiaramanidina simulator - - About FlightGear - DCS ANDIAN-DAHATSORATRA - BENCHMARK Sims
Fotoana mamorona pejy: 0.381 segondra